HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo guul ka gaartay Sevilla, iyadoo kaalinta labaad soo gashay
April 4, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Spain 0
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa soo gashay kaalinta labaad ee horyaalka waddanka Spain ee LaLiga kaddib markii ay guul cidhiidhi ah ka gaadhay Sevilla oo ay gool madi ah kaga adkaatay.
Kulan xiise badnaa oo ka dhacay Camp Nou ayay Barcelona ku muquunisay Sevilla oo ay ka tuurtay sallaanka kaalinta labaad ee horyaalka oo muddo dheer ay kusoo jirtay, waxaana libintan ku hoggaamiyey mucjisada khadka dhexe ee Pedri oo gool qurux badan dhaliyey dhamaadka ciyaarta oo ay 20 daqiiqadood ka hadhsan yihiin.
Natiijadan ayaa ka dhigan in Barcelona ay kaalinta labaad ee horyaalka LaLiga soo gashay, waxaanay yeelatay 57 dhibcood waxaanay farqiga goolasha iyo kulan u baaqi ah kaga sare martay Atletico Madrid iyo Sevilla oo ay isku dhibco yihiin.
Real Madrid oo hoggaanka horyaalka haysa ayay saddexdan kooxood ka dambeeyaan min 12 dhibcood, waxaase u dhowaan karta Barcelona maadaama hal kulan baaqi u yahay.
Horyaalka LaLiga ayay ka hadhsan yihiin siddeed kulan, waxaanay u muuqataa in kooxahani aanay rajo badan ka qabin inay soo qabtaan Real Madrid maadaama ay 12 dhibcood oo u dhigma afar ciyaarood ay ka horreyso.